NextMapping | Onye-isi Nduzi na NextMapping ™ Cheryl Cran
NextMapping™ maka ndi isi
A na-emepụta ụlọ ọrụ dị njikere maka ọdịnihu site n'aka ndị isi njikere dị n'ihu bụ ndị nwere nkà n'ịgbazi mgbanwe na ihe ọhụrụ na-agba ọsọ mgbanwe.
Anyị na ndị ahịa anyị na-arụkọ ọrụ iji wepụta usoro mmepe iji bụrụ nke na-akawanye njọ, na -eme ihe ọhụrụ ma na-enyere nzukọ aka ịdị njikere ugbu a.
Ndị na-agụghị akwụkwọ na narị afọ nke 21 agaghị abụ ndị na-enweghị ike ịgụ na ide, mana ndị na - enweghị ike ịmụ akwụkwọ, agụghị akwụkwọ na ịmụtaghachi. ”
Ọdịnihu nke mkpịsị ugodi ọrụ na-enye nghọta, nyocha na ụzọ a ga-esi nweta ugbu a na ọdịnihu.
Igodo ndị ndu anyị na-enye echiche dị omimi na ụzọ dị iche iche okike iji nyere aka wulite idu ndu dị njikere n'ọdịnihu nke na-akpali mgbanwe maka ọdịnihu ọrụ.
Chepụta ọdịnihu gị
Anyị na gị na-arụ ọrụ iji mee ka ọhụụ nke mmụọ nsọ gị maka ọdịnihu na ndụ. Site na usoro NextMapping ™ anyị na-enye ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị aka iduzi, mmepe na usoro ndị enyere aka iji nyere gị aka ịmepụta ọdịnihu gị.
Oge erugo ịmalite nkà na ikike reskill n'ọdịnihu
Iji dị ndụ ma na-eme nke ọma n'oge a, a na - agbanwe ngwa ngwa, ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị na - edu ha kwesịrị ime ka ezụlite, omume, akụrụngwa na akwara dị mkpa.
Nagide onodu uzo
Oge nke linear uche agwụla - ndị isi ga-anabatacha uche ịmata ihe na-achọkarị ikwenye n'ihe ha chọrọ ịbụ eziokwu maka mmepe onye ndu dị mma.
Kwado atụmatụ usoro ọmụmụ gị n'ọdịnihu
Thezọ kachasị mma na-amalite site na 'gịnị kpatara' ma bido eburu n'uche ihe ga-eme n'ọdịnihu. Ndị ndu dị njikere n'ọdịnihu ga-atọ ntọala dị mma iji mepụta ọdịnihu ha chọrọ. Depụta usoro ndị a site na ịhazi ụbọchị iri, ọnwa iri ma ọ bụ afọ iri pụọ.
Emere mkpebi kachasị mma na data dị ugbu a, nke ziri ezi yana ezigbo ọnọdụ. Researchzọ nyocha anyị gụnyere nyocha, mgbasa ozi na-elekọta mmadụ, otu ndị nwere ọdịnihu na ndị ọkà mmụta sayensị banyere omume, yana ndị otu nwoke na ndị nwanyị na-elekwasị anya na ndị isi na ndị ọzọ.
Chọrọ enyemaka anyị maka mmepe nke mmepe nke nhazi?